Pakistana: Mitohy Ny Famonoana Ikendrena Ny Shiita · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Mitohy Ny Famonoana Ikendrena Ny Shiita
Voadika ny 20 Aogositra 2012 3:06 GMT
Ny 16 Aogositra 2012, nisy olona mitam-piadiana nanakana fiabe mpitatitr'olona tao Mansehra, nisintona Silamo Shiita 20 ary namono azy ireo an-kitsirano. Tranga fahatelo nikendrena ny vondrom-piarahamonina Shiita tao Pakistana io tato anatin'ny 6 volana.
An-dalana hamonjy an'i Gilgit, toerana malaza amin'ny fizahantany any avaratr'i Pakistana ilay fiarabe, ary avy any Rawalpindi, tanàna iray akaikin'i Islamabad renivohitra.
Araka ny nambaran'ny manampahefana ao amin'ny polisy, Shafiq Gul, nisaron-tava ireto lehilahy nitam-piadiana ireto ary ireo niharam-bono kosa dia nosintonina avy any anaty fiara telo samy hafa :
Nosakanan-dry zareo ny fiara telo, nisava azy ireo ary namondrona ny olona ho antoko telo misy dimy, enina ary sivy, ary notifiriny ho faty. Shiita izy rehetra ireo
Ny Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) no niaiky fa tompon'andraikitra tamin'ilay fanafihana
Tanaty tranga mitovy amin'izao , ny 28 Febroary, lehilahy nitam-piadiana nanao fanamiana miaramila no nitatitra Silamo Shiita 18 taminà fiarabe avy ao Rawalpindi ho any Gilgit ary namono azy ireo. Ny 3 Aprily, tao an-tanànan'i Chilas dia andianà Silamo Sionita no nisarika Silamo Shiita 9 avy tany anaty fiarabe ary nitifitra azy ireo ho faty ihany koa
Mafàna fo avy amin'ny Majlis e Muslimeen Pakistan manao hetsi-panoherana manohitra ny famonoana ikendrena ireo Shiita tao Gilgit & Quetta. Sary avy amin'i Rajput Yasir. Fizakà-manana Demotix (10/4/2012)
Haingana tamin'ny fanehoan-kevitra ny fampahalalam-baovao sosialy ao Pakistana. Ilay mafàna fo, Ali_Abbas_Zaidi, dia isan'ireo voalohany nitatitra ity tranga ity:
@Ali_Abbas_Zaidi: Navoaka hijoro teo ivelan'ny fiarabe fitaterana (indray) ny mpandeha, nofantarina dia notifirina. 18-20 no voalaza fa maty #Gilgit – Azo saintsainina ho #ShiaGenocide (famonoanaShiita)
Naneho ny rikorikony i @Darveshh noho ny nitrangan'ity raharaha ity tao anatin'ny volana Ramadany Islamika :
@Darveshh: fandevenana 20. fianakaviana 20. Ramzan faha-27 iny. Telo andro taorian'ny Eid. Saino ireo ankizy tsirairay, reny, anabavy ary rahalahy. #ShiaGenocide #Gilgit
Fanehoan-kevitra misimisy :
@sheerazhaider: #ShiaKilling Faninefany izao tao anatin'ny 4-bolana, voalohany kosistan, faha-2 chelas, faha-3 manwar gilgit, ary ny farany babusar naraan androany.CJP Mifoah Ve Ianareo ao?
@yaroun1: RT @moeidhaider: @AwkwardShia @Marwa_313 : saika isanandro no vonoina an-kerisetra ireo Shiita ao Pakistana (quetta gilgit) & mangina ny ankamaroany & eny fa hatramin'ny mpampahalala vaovao
@zahaibnabeel: Manameloka mafy ny famonoana nikendrena ireo Silamo Shiita 20 tao Gilgit. Mila aely ny hafatry ny mpaminany Muhammad (S.A.W) momba ny fandriampahalemana & sy ny firindrana eo amin'ny rehetra.
@Aushpaz Eritrereto raha hoe notanterahana tao anaty fandrindrana maty paika ny famonoana ireo voalohany nokendrena tao #Pakistan, mety tsy ho nisaona ny tao #gilgit akory isika androany!
@AnjumKiani: Raha tianao ny hiantso azy io ho #ShiaGenocide (famonoanaShiita) dia antsoy araka izay, Raha tianao ny hamaritra azy ho #SunniGenocide (famonoana Sionita) dia ataovy. Fa ho ahy dia #MuslimGenocide (Famonoana Silamo) io. #Gilgit
@javhb: RT @AnjumKiani: Ireo 16 lasa maritior tao #Gilgit noho ny nataon'ny mpampihorohoron'ny Khawarji dia sady tsy Sionita 16 no tsy Shiita 16, Silamo Pakistane izy ireny. Teboka famaranana!